आफ्ना श्रीमानलाई परस्त्रीसँग कारमा रंगेहात फेला पारेपछि यी महिलाले जे गरिन् :हेर्नुहोस् [भिडियोसहित] – live 60media
आफ्ना श्रीमानलाई परस्त्रीसँग कारमा रंगेहात फेला पारेपछि यी महिलाले जे गरिन् :हेर्नुहोस् [भिडियोसहित]
काठमाडौं । पति परमेश्वर हो भनिन्छ । तर पति परमेश्वरकै मति भ्रष्ट भएपछि के गर्नु । यस्तै भएको छ एक घटना । पछिल्लो समयमा विवाहपछि पनि अतिरिक्त सम्बन्धमा रहने महिला–पुरुष दुबैको संख्या बढ्दो छ । यो एक खालको सामाजिक विकृति पनि हो । यस्तै एक घटना भारत, महाराष्ट्रको मुम्बईबाट सार्वजनिक भएको छ । अहिले एक भिडियो सामाजिक सञ्जालमा खुब भाइरल भइरहेको छ । वास्तवमा भएको के भने त्यहाँको परेड मार्गमा एउटी महिलाले आफ्ना लोग्नेलाई अर्की एक महिला अर्थात पतिकी प्रेमीकासँग रंगेहात फेला पारिन् ।
त्यसपछि जे भयो त्यो थप रोचक छ । उनले बीच सडकमा कारलाई रोकिन् ।
उनले आफ्ना श्रीमान् र उनकी प्रेमीकालाई कारबाट बाहिर निकालेर जे गरिन् त्यो हेर्नेहरुलाई पनि खुब मज्जा आउँदैथ्यो । उनीहरुको वास्तविक तर नाटकीय शैलीले सडकमा लामो जाम थियो । घटनास्थलमा भएको ट्राफिक प्रहरीले पनि उनीहरुलाई रोक्न खोज्यो तर ति महिला श्रीमानलाई त्यस्तो हालतमा देखेपछि कहाँ रोकिन् मान्थिन् र ? समाचारमा जनाइए अनुसार यो घटना शनिबार साँझको हो ।
यो भिडियोमा देख्न सकिन्छ ति महिलाले पहिले आफ्नो कारलाई सडकमा रोकेर राखिन् । दोस्रो कारमा, महिलाका पति आफ्नो प्रेमिकासँग मस्त बसिरहेका थिए । ती महिला त्यस कारको अगाडि उभिएर ठूलो स्वरले चिच्याइन । यी सबै दृश्य देखेर उनका पति चिन्तित थिए । तर उनले लामो समयसम्म पनि कारको ढोका खोलेनन् । सार्वजनिक स्थानमा कार छोडेर आएकी महिला विरुद्ध ई–चालान जारी गरिएको छ ।
नो पार्किङ स्थलमा कार रोकेर श्रीमानलाई चेतावनी दिन आउँदा उनी उल्टै ट्राफिक प्रहरीको कारबाहीमा परिन् । यस घटना हुँदै गर्दा उपस्थित मानिसहरूले भने कि शनिबार साँझ ५ बजेतिर एक जना पुरुष एक युवतीलाई लिएर कारमा जाँदै थिए । त्यसपछि उनकी श्रीमतीले कारलाई ओभरटेक गरेर रोकिन् । यस पछि, पत्नीले समुद्री किनारको बाटोमा एक हंगामा सुरु गरिन् । उनी कारको बोनेटमा चढिन् । उनले आफ्नो जुत्ताको साथ कारको अगाडी ऐनामा हानिन् । यस समयमा त्यस मार्गमा ट्राफिक पूर्ण रूपमा रोकिएको थियो । जब महिलाका पति कारबाट बाहिर निस्किए, तब उनले तत्काल ह मला गर्न भ्याइन् ।
यस पछि कारमा अर्काको श्रीमानसँग आनन्दले बसेकी महिलालाई त झन बाँकी राख्ने कुरैँ भएन् । घटना थप बढिरहेको देखेर प्रहरीले पनि हस्तक्षेप गर्यो । हंगामा लामो समयसम्म जारी रह्यो र परेड रोडमा जाम भयो । दुई बीचको सडक विवादको यो भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुँदैछ । श्रीमान र श्रीमती फरक फरक कार चढ्न सक्ने भनेपछि उनीहरु हुनेखाने परिवारका रहेछन् भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । धनाढ्य बर्गमा यस्ता लफडा धेरै हुने गरेको सामाजिक अभियान्ताको दावी छ । भिडियो हेर्दा विषय अझै रोचक छ ।
← बिचरा ! हेर्नुहोस बिदेशी जस्तै गोरो देखिने यी नेपाली बहिनिको भित्री पि’डा , सेती भु:त भन्दै मलाई जिस्का’उछन् (भिडियो सहित)
स्वाद र औषधिले भरिपूर्ण अमलाको जुसले निको पार्छ यी रोगहरु- जानकारी सहितको भिडियो हेर्नुहोस् →